नेपालको संविधान २०७२ र आदिवासी जनजातिको असन्तुष्टि - Tamang Online
– बिगेन्द्र तामाङ
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पनि ५ वर्ष पुरा भएर छैठौं वर्षमा लागेको छ । सरकारले असोज ३ संविधान जारी भएको दिनलाई दिवापलीको रुपमा नै मनाउने उर्दी नै जारी गरेको पनि सुनिन्छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनकर्मीहरुले भने “असोज तीन – कालो दिन”को रुपमा मनाउने गइरहेको पनि सुनिन्छ । निर्वाचनको बेला भोट माग्दा बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुले आदिवासी जनजाति समक्ष मीठो मीठो नाराहरु गुञ्जाउदै आए तर निर्वाचन लगतै ती सबै पानीको फोका भए । बरु अधिकार आफ्नो हातमा आएपछि उहि एक जाति, एक भाषा र एक धमलाई अंगाल्दै निरंकुशताको आभाष दिलाइरहेको छ ।
पछिल्लो पटक संविधानको धारालाई न त राज्यको अंग लोक सेवा आयोगले पालना गरे न त सर्वाेच्च अदालतले बरु दुवैले संविधानको मुल मर्म विपरित कार्यहरु गरे, निर्णयहरु दिए । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको पहिचान र प्रतिनिधित्वको सवालमा संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नहुनु नै हो ।
२०४७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भयो, जनता केही हदसम्म स्वतन्त्र भयो । देशमा नयाँ संविधन जारी भयो तर त्यस संविधान निर्माणमा राजा, नेपाली काग्रेस र संयुक्त बाम मोर्चाले संविधान बनाउने प्रक्रिया र परिणाम दुवैमा नियन्त्रण ग¥यो र जनता टुलुटुलु हेर्ने मुक दर्शक मात्र बने । सँचै नयाँ नेपालको नयाँ संविधान आउन सकेन । जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लैङ्गीक प्रतिनिधित्व हुन सकेन । २०४७ को संविधानमा सम्बोधन हुन नसकेका आदिवासी जजातिको मागलाई ०६२÷६३ को संविधानमा सम्बोधन हुनेछ भन्ने लागेको थियो तर आज २०७२को संविधानसम्मा आईपुग्दा पनि संविधानको धारामा आदिवासी जनजातिलाई उकास्ने कुनै कानून बन्न सकेन ।
आदिवासी जनजातिले, स्कुलमा अरुको भाषा पढ्नु प¥यो, अस्पतालमा अरुको भाषा बोल्नु प¥यो, प्रशासनमा अरुको भाषामा नै पैरवी गर्न प¥यो । अदालतमा अरुको भाषामा बहस गर्न प¥यो जसले गर्दा आदिवासी जनजाति कहिले पनि अब्बल हुन सकेन । सुख सुविधाका सबै सिस्टममा एक भाषा, एक धर्म र एक जातिको बर्चस्वलाई झेलिरहयो ।
“यो देश हाम्रो साझा हो” भन्ने भावनाको कदर गर्दै निजामती सेवामा, निश्चित सिट संख्यामा निश्चित जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिंग वा अन्य त्यस्तै आधारमा त्यही वर्गका नागरिकलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई राज्य संयन्त्रमा सहभागी गराउने संरक्षणमुखी औजार हो— आरक्षण । नेपालका सन्दर्भमा, विगतमा खस–आर्यले यो देशमा शासन स्थापित गरेर मूल निवासी बहुजनमाथि वर्ण व्यवस्था कायम गरे । सोही वर्ण व्यवस्थाको उपजस्वरूप पछाडि परेका र पारिएकाहरूलाई मुलुकको प्रशासन सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण अभिभारा वहन गराउने भनेर निजामती सेवामा आरक्षण लागू गरियो । समावेशितालाई संस्थागत गर्नु यसको ध्येय हो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधन ९२०६४० ले आरक्षणको व्यवस्था गर्यो । यसले निजामती सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति हुने ४५ प्रतिशत पद छुट्याई, सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपांग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने प्रावधान गरेर आरक्षणलाई संस्थागत गर्यो । यसले निजामती सेवामा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो । २०७२ मा जारी भएको संविधानमा यसलाई झन् व्यापकता दिँदै मुस्लिम, थारू जस्ता समुदायलाई समेत संविधानमा किटान गरेर उनीहरूको पहिचानलाई सुनिश्चित गरियो । तर, आरक्षण दिएको तीन दशक नपुग्दै आरक्षण कोटा चाहिँदैन भन्नु कत्तिको जायज हो रु आरक्षण हटाउने हो भने संविधानको ४५ प्रतिशत र ५५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत बनाएर समानुपातिक समावेशी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । जबसम्म राज्यको हरेक निकायमा समान अधिकार पहिचानका साथ कायम हुँदैन, तबसम्म आरक्षणको आवश्यकता पर्छ । तर, जेठ १५ को लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आदिवासी, दलित, मुस्लिम, मधेसी, पिछडिएका वर्गलाई पछाडि पारियो । यो कुनै पनि हालतमा हामीलाई मान्य छैन । आयोगले नेपाली जनताको ठूलो क्रान्तिबाट स्थापित आरक्षणलाई हटाउनु आदिवासी जनजाति समुदायलाई अगाडि बढ्न नदिनु नै हो ।
आरक्षणलाई कसैले राम्रो भनेर बुझे, कसैले गोबर भनेर बुझे अनि कसैले नराम्रो भनेर पनि व्याख्या गर्दैछन् । जसले आरक्षणलाई गोबर भनेर बुझ्छन् उनीहरु अझै अगाडि गोबर तर्क गर्छन – “आरक्षणले देश विग्रन्छ, आरक्षण दिने हो भने गरीबलाई दिइयोस । अबको विश्वमा महिला÷पुरुष बाहेक अरु कुनै जात छैन ।” यसो भनिरहाँदा समावेसीता र आरक्षण विरोधीले सरकारी जागिर गरिबका लागि मात्र छाडिदिएका छन् र? धनीहरु जागिरको दौडमा छैनन? धनीले लोकसेवा भरेका छैनन? सेना र पुलिसको उपल्लो तहमा गरिबको लागि भनेर छोडेका छन? अवश्य छैनन ।
लेखक – संघीय सदस्य, नेपाल तामाङ घेदुङ
२०७७ असोज ३, संविधान दिवस ।
« इजरायलद्वारा यूएई र बहराइनसँग ‘ऐतिहासिक’ सम्झौतामा हस्ताक्षर (Previous News)
(Next News) नेफिन इजरायलद्वारा नेपालको संविधान किन विभेदकारी बिषयक अन्तरक्रीयात्मक कार्यक्रम हुँदै »